Sida loo sameeyo badeecadahaaga muuqaalka ah markaad qof raadinayso Amazon aad kudartay keywords keywords?
Sida laga soo xigtay tirakoobyada warshadaha dhowaan, 55% dhammaan baaritaannada alaabada ee internetka waxay ka bilaabmaan Amazon. Amazon wuxuu noqday raadin raadinta caansan oo ka badan Google ee ku saabsan cilmi baarista. Sannadkii hore, mashruucan caan ah ee tafaariiqda adduunka ayaa dhaaftay $ 107 bilyan oo iib ah. Waxay micnaheedu tahay in ay ka badan tahay $ 12,000,000 iibka saacad kasta celcelis ahaan. Miyaad u malaynaysaa in tirooyinkani ay aad u fiican yihiin? Waxaan aaminsanahay in tani ay tahay mid aad u qanacsan oo ku dhiirigelisa ganacsiga Amazon.
Si kastaba ha noqotee, ganacsato badan oo online ah ayaa ka walwalsan in Amazon ay gooysay faa'idadooda faa'idada iyo in ay xaddidaan kobcintooda ganacsiga. Cabsiyadani maaha kuwo aan macquul ahayn, waxayna noqon kartaa mid run ah iyadoo ku xiran habka ganacsigaaga. Si kastaba ha ahaatee, khatartani waxay u qalantaa qaadashada. Amazon awoodda ay leedahay waxay bixisaa faa'iidooyin badan oo loo yaqaan 'ecommerce' oo ka caawiya ganacsatada in ay sameeyaan nasiibkooda. Amazon waxay suurtogal u tahay in ay ka faa'iideysato faa'iidooyinka ganacsigaaga. Wax kasta oo aad u baahan tahay waa inaad raacdo xeerarka ciyaarta Amazon.
Talooyin lagu kordhinayo aragtidaada ku saabsan raadinta Amazon
Naftaada dhig meel macaamiishaada ah. Markaad ka soo iibsato Amazon, maxaad inta badan ka hubineysaa dhammaanba? Dabcan, dib u eegista macaamiisha dhawaan. Waxaad u baahan tahay inaad hubiso in dadka kale ay ku qanacsan yihiin shayga aad iibsaneyso. Si kale haddii loo dhigo, macaamiisha badankoodu waxay u baahan yihiin caddayn bulsho si ay go'aankooda u iibsadaan.
Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay inaad raadiso fursadaha si aad u hesho dib-u-eegid wanaagsan oo ku saabsan macaamiishaada dhawaan. Waxaad ka saari kartaa alaabtaada ama waxaad macaamiisha siin kartaa qiimo dhimis si aad u hesho dib u eegis cadaalad ah oo daacad ah. Warbixinnada ku jira sawirada iyo fiidiyoowga waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin kuwa ugu qiimaha badnaa macaamiishaada iman kara. Waxaad u baahan tahay inaad u baahatid dib u eegis si wax ku ool ah iyo abaalmarinta macaamiisha wixii ka dambeeya iibsashada. Waxa kale oo macquul ah in lagu maalgaliyo liiska sugitaanka iyo hagaajinta adeegga macaamiisha si loo helo dib u eegis daaweyneed oo dheeraad ah. Ugu dambeyntiina, waxaad u baahan tahay inaad fahanto qaabka qiimaha badeecada Amazon oo aad ujoogsatid qiimahaaga. Tusaale ahaan, waxaad ku siin kartaa macaamiishaada qiimo dhimista iyo socodsiinta heshiisyada maalinlaha ah si aad uga dhigto mid daacad u ah astaantaada. Istaraatiijiyada suuq-geynta oo ay la socdaan dib-u-eegid wanaagsan iyo liis garayn ku-ool ah ayaa abuuri kara istiraatiijiyad wax ku ool ah Amazon.
Waxaa intaa dheer, waxaa laga yaabaa inay awood u leedahay inay dib u eegis ku samayso goobaha kale sida ilaha dib u eegista, blogska ku habboon, iyo kan warbaahinta bulshada ee jecel. Iyada oo kor loogu qaadayo dib u eegistaada ku saabsan kanaaladan, waxaad heli doontaa saameyn aan caadi aheyn, si weyn u kobcinta wacyigelinta brandka. Amazon SEO
Amazon raadinta raadinta Amazon ayaa kaalin weyn ka ciyaaraya helitaanka Amazon SEO
sheygaaga ku qoran horay uga mid ah dadka dhagaystayaasha ah. Amazon waxay leedahay kala duwanaansho kala duwan si ay u go'aamiyaan alaabooyinka si ay u muujiyaan isticmaalaha shakhsiga ah sida uu jecel yahay iyo taariikhda raadinta. Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay inaad falanqeyn ku sameyso asaasiga SEO ee asaasiga ah iyo abuurista liiskaaga iyaga oo raacaya iyaga.
Diirad gaar ah waa in la siiyaa mawduuca sheygaaga. Waa inay ku jiraan sifooyinka alaabta muhiimka ah iyo shuruudahaaga raadinta qadarka sare. Ka dibna hubso in aad buuxisid dhammaan qodobada rasaasta ama maahan. Waa inay sidoo kale ku jiraan shuruudaha raadinta ee la raadinayo iyo in yar uun la tiriyo waxyaabaha sifooyinka muhiimka ah iyo sifooyinka. Faahfaahintaada waxay ubaahan tahay faahfaahin buuxda iyo keywords keywords. Hubi inaad ku liis garaysay dhamaan faa'iidooyinkaaga sheygaaga qaybta sharraxaadda.
Ka taxadar shuruudaha raadinta macaamiishaada iman doona waxay isticmaali doonaan si ay u helaan badeecooyinkaaga, una eeg ereyada muhiimka ah ee tartanka suuqa. Xaaladaha intooda badan, waxaa macquul ah in la isticmaalo shuruudaha raadinta dheeraadka ah ee ay isticmaalayaashu isticmaali karaan si ay u helaan waxyaabo gaar ah. Shuruudaha raadinta ayaa ku siin doona fursado dheeraad ah si aad kor ugu qaaddo darajadaada SERP.
In kasta oo ay had iyo jeer muhiim tahay in la ogaado qiimaha wax ka beddelista qiimeynta raadinta, aragtida ugu horeysa waa inay markasta hor istaagtaa. Taasi waa sababta aad u baahan tahay inaad maalgashato waqtigaaga iyo dadaalka aad ku aragtid sawirada tayo sare leh si aad u bixiso aragti tayo leh. Hubso in liiskaaga ku jiro muuqaalo tayo iyo muuqaal fiidiyoow ah.
Raadi fursadaha lagu iibsado iibin badan oo ka socda raadinta Amazon
Ha xaddidin fursadaha ganacsigaaga, kor u qaadida alaabadaada kaliya Amazon. Waxaad u baahan tahay inaad ka fekertid ka weyn. Waxaa jira fursado badan oo wax ku ool ah oo ku saabsan Amazon. Waxaad ka heleysaa alaabtadaada lagu soo bandhigay saxaafadda, adeegso barta blogka iyo iskaashi la sameeya saameynaha fekerkaaga ee ku jira naftaada. Intaa waxaa dheer, waxaad ku yeelan kartaa joogitaan xooggan oo ku saabsan munaasabadaha iyo blogyada, kooxaha warbaahinta bulshada, iyo kan kale.
Furaha guusha Amazon waa faham qoto dheer oo suuqa laga iibsado. Sidaa darteed, waa inaad ogaataa sida loola jeedo in si sax ah loo dhigo raadinta Amazon si aad uga soo baxdo dadka badan. Samee wax walba oo macaamiisha maskaxda ku haya, waxaadna arki doontaa natiijo. Bixi macaamiishaada leh alaab tayo sare leh iyo taageerada macaamiisha ugu fiican. Marka aad sidaas samaynayso, waxaad hagaajin doontaa taariikhdaada iibinta iyo inaad soo jiidato macaamiil badan alaabtaada. Amazon
Haddii aad tahay qof iibiya Amazon, waxaad u baahan tahay inaad ka qeyb qaadato qiime tartan ah
ee ku jira qiimaha qiimaha ah haddii aad jeceshahay iyo in kale. Sicirka tartanka waa arrin muhiim ah oo ku saabsan Amazon oo ka caawiya ganacsatada inay ku guuleystaan ​​Box Buy. Badankood iibsadey Amazon waxay isticmaalaan qalabka digniinta khaaska ah si ay ula socdaan sicirka suuqa oo sii wado tartan.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira siyaabo kale oo aad ku joogi kartid TOP-ga Amazon e-commerce. Waxaad diirada saari kartaa horumarinta qiimeynta adiga oo ka jawaabaya dhamaan fariimaha muhiimka ah. Waxaad u baahan tahay inaad naftaada iska leedahay sida iibiye wanaagsan oo aad macaamiisha u siisid sababaha lagugu dooranayo tartamayaasha.
Waxaa intaa dheer, waa inaad had iyo goor ka dhigtaa lacagtaada iibsashada. Sidan oo kale, wadista baabuurta dheeraadka ah waxay kuu oggolaaneysaa inaad iibsato wax ka badan oo aad hoos u dhigto kharashkaaga soo kicinta ugu dambeyntii.
La soco in mustaqbalka dhalashada iyo saamiyadu ay si xun u saameyn karaan sumcaddaada sumcaddaada iyo hoos u dhigo alaabtaada Amazon. Taasi waa sababta aad ugu baahan tahay inaad diirada saarto hoos u dhaca khaladaadka daba galka sida maraakiibta, miisaannada khatarta ah, iyo badeecadaha ka baxsan. Waxaa lagama maarmaan ah in alaabtaada marwalba ay ku jirto maadada maxaa yeelay waxay u adeegtaa sida asaasiga ah ee lagu guuleysanayo sanduuqa iibsiga iyo heerka sare ee Amazon. Haddii aad si dhaqso leh iyo si sax ah u geyn kartid alaabtaada, Amazon ayaa ku abaal marin doonta faa'iidooyinka suuq geynta. Raadinta lamaanayaasha iyo fursadaha cusub Amazon
Waxaa jira fursado badan sida loo kordhiyo iibka Amazon. Hubso inaad isticmaasho dhammaantood si kor loogu qaado dakhliga guud ee ganacsigaaga. Waxaad isku dayi kartaa wadashaqeyn la noocyo kale oo Amazon ah si aad u horumariso awooddaada calaamaddaada iyo inaad hesho iibsiyo ganacsi cusub Source .